‘बागी ३’: कस्तो छ फिल्म ? - Everest Dainik - News from Nepal
‘बागी ३’: कस्तो छ फिल्म ?
एजेन्सीः यो साँचो हो कि हिन्दि फिल्महरुमा एक्सनको बोलबाला छ र बदलाको भावनाले या नजिकको सम्बन्ध भएकाहरुको लागि पर्दामा हिरो ले भिलीयन लाई पिट्दा दर्शकहरु खुब मज्जा लिन्छन् । निर्देशक अहमद खानले पनि दाई लाई बचाउने र आतंकबादको विरुद्ध उत्रिएको हिरो मार्फत गजबको एक्सन प्रस्तुत गरेका छन् । तर कथामा अलिकति मिहिनेत गरेको भए कुरै अर्कै हुने थियो ।
दंगाको क्रममा आम मानिसहरुको ज्यान जोगाउने चक्करमा आफ्नो ज्यान गुमाउन लागेको इन्स्पेक्टर चतुर्वेदी (ज्याकी श्राफ) ले आफ्नो अन्तिम समयमा छोरा रोनी (टाइगर श्राफ) लाई अर्को छोरा विक्रम (रितेश देशमुख) को जिम्मेवारी सुम्पन्छन् । र त्यसपछि कसैले विक्रम माथि आँखा उठाउना साथ रोनीको रगत उम्लन्छ र उसले सामुन्ने हुनेको मरणान्त हुने गरि पिटाइ गर्थ्यो । विक्रमको भबिष्यको लागि रोनीले आगरामा पुलिसको जागिर गर्न पनि प्रेरित गर्छ । जहाँ रोनीले मानव ओसारपसार गिरोहको संजाल तोड्न विक्रमलाई सहयोग पनि गर्छ ।
याे पनि पढ्नुस 'बागी ३' को आक्रामक व्यापार जारी, ६ दिनमा कति कमायो ?
उक्त गिरोहबाट धेरैलाई मुक्त गराए पछि विक्रम आफ्नो विभागको हिरो बन्छ र उसलाई मानव ओसारपसारको असली नाइके समात्नको लागि सिरिया पठाइन्छ । सिरियाका खुंखार आतंकवादी अबू जलाल गाजा (जमील खोरी) ले विक्रमलाई बन्दि बनाउछ । त्यसपछि रोनी आफ्नी प्रेमिका सिया (श्रद्धा कपुर) सँग सिरिया आउछ र अब उसले कुनै पनि हालतमा आफ्नो दाई लाई बचाउनु पर्ने हुन्छ ।
निर्देशक अहमद खानले ‘बागी २’ भन्दा माथिल्लो स्तरको एक्सन प्रस्तुत गर्ने कोशिश गरेका छन् र यसको लागि उनले फाइटका दृश्यहरु लाई दमदार बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । मल या बाटोको फाइट, या हेलिकप्टर अथवा सेनाको टैंकको एक्सन दृश्य सबै हलिवुड फिल्म बराबरको जस्तो लाग्छ । तर कथा र पटकथामा फिल्म कमजोर छ ।
याे पनि पढ्नुस बागी–३ ले तीन दिनमा कति कमायो?
श्रद्धा कपुरको माध्यम बाट कमेडी र रितेशको माध्यमबाट भावनात्मक कुराहरु जोडिएको छ । केहि दृश्यहरुले हसाउछन पनि, तर फिल्म हेरिरहँदा ८०-९० को दशकको बदलामा आधारित फिल्महरुको याद आइरहन्छ । क्लाइमेक्सको एक्सन दृश्यले सास रोकिन्छ तर त्यो अनाबश्यक तन्काइएको छ । फिल्मको लम्बाई कम गर्न सकिन्थ्यो । शंताना कृष्णन रविचंद्रनको छायांकन हेर्न लायक छ ।
विशाल-शेखरको संगीत रहेको गीत ‘दस बहाने करके ले गई दिल’ लाई खुब मन पराइएको छ । रेडियो मिर्चीको उत्कृष्ट २० गीतहरुको सुचीमा यो गीत पाँचौ स्थानमा छ । फिल्मका अन्य गीतहरु ठिकठाक मात्र छन् । आइटम गीत ‘डू यू लव मी’ मा दिशा पटानीले गज्जबको नृत्य देखाएकी छिन् ।
याे पनि पढ्नुस ‘बागी–३’मा कोरोनाको प्रभाव, अपेक्षाअनुसार भएन कमाई
रितेशले सोझो र डरपोक चरित्र त कुशलताका साथ निभाएका छन् तर पटकथामा उनको चरित्र सहि ढंगले सँग बुनिएको छैन । अंकिता लोखंडेको भूमिकालाई पनि त्यति स्थान दिईएको छैन । मुख्य खलपात्र अबू जलालको भुमिकामा जमील खोरी डरलाग्दो देखिन्छन्, तर अन्य खलपात्रहरु जम्न सकेका छैनन् । विजय वर्मा र जयदीप अहलवातले आफ्नो भुमिका ठिकठाक निभाएका छन् ।
ट्याग्स: ‘बागी ३’